Posthoherhevskaya तालिका 2021 को साथ सेवास्टपलमा होटलहरू
सेवास्टोपोल होटेलहरू फेला परेन फिल्टरहरू फिचरहरू
शहरको केन्द्रमा सेभस्टोपोल होटलहरू
अप्ट्रेसनहरू स्टार्सेन्सोस - दन्त्यकथामा लिजेन्ड प्राचीनसको गल्लीमा सेवास्टोपको शहरमा, पुरातात्विक रिजर्भ चेरोनेज ट्रिक्रोस्कीबाट एक मिनेट पैदल, एक डिजाइन होटेल सिर्जना गरिएको थियो, जुन सबै क्रान्तिमा फेला पार्न सकिंदैन। सायद धेरै जसो संयोजन "डिजाइन डिजाइन होटल" को लागी असामान्य ध्वनि हुनेछ। अर्को एक पटक जो एक पटक चेर्सोन अपार्टमेन्टेमेन्टको भ्रमण गर्थे, सँगै सेभास्टपको शहर को एक दृष्टि कल।
<< p> उनकी श्रीमतीसँग, विवाहको वार्षिकोत्सव मनाए,2दिनसम्म EPYY VIP-अपार्टमेन्ट फिल्महरू। होटलमा धेरै रमाइलो वातावरण मैत्री, आरामदायक, मैत्री कर्मचारी हो। मैले यो खुसी भए कि यसको सौनाको इलाकामा र यस्तै - तपाईं आत्मा र शरीरको साथ आराम गर्न सक्नुहुन्छ। जीवनसाथीले भने कि अर्को वर्ष ऊ फेरि चाहन्छ। हाबिल
चेर्सोन्सस। हजारौं वर्ष, मानिसहरु यस लहरी सुशीमा बस्ने अधिकारको लागि लडे। टुर्गोतीहरू, ग्रीक, ग्रीक, कुलकन्टिन, रशली र फेरि यस शहरलाई यहाँ बसोबास गर्ने बहाल गरियो। अब र तपाईंसँग भ्लादिमाइर क्याथेड्रलरको घण्टीको घण्टी बग्ने अवसर छ, समुद्रको ड्रिलिंग समुद्रलाई घुमाउनुहोस् र चमत्कारकारी समुद्री सूर्यास्तहरूको प्रकारका आनन्द लिनुहोस्। सुविधाजनक स्थान (1 15 मिनेट सेवास्टोपोलको केन्द्रमा 1 15 मिनेट।
पाहुना घर "कोट डी अजुरर" रिसोर्ट पोक्कीया उच्चारणविकामा पेन्सन "को उत्तरमा रहेको छ, समुद्री तर्फको उत्तरी किनारमा बेलबेड नदी। मार्ग ट्याक्सीमा केवल 10 मिनेटमा डुबकीमा एक अविस्मरणीय पैदल यात्रा गर्नुहोस् - र तपाईं पहिले नै गणना पियरमा हुनुहुन्छ - सेवास्टोपोल
हामी तपाईंको ध्यान नयाँ होटेल "fordwind" ल्याउँदछौं जुन बालाकलाभा, -10-10 मिनेटको बीचमा अवस्थित छ। Nazukina, पनडुबिनको संग्रहालय (बालाकलाको एक आकर्षण), जेनोइलावुवाको आकर्षण, जेनोइज किल्ला, बालबालिकाको पार्क नजिकै। आरामदायक यातायात आदानप्रदानले तपाईंलाई सजिलै बालाकलाभा वा सेवास्टपलको कुनै पनि बिन्दुमा पुग्न मद्दत गर्दछ। उत्साह
स्मारक एडमिरल Nakhimov को लागि नजिकै राम्रो हो? एडमिरल Nakhimov को साथ केही लोकप्रिय होल्डिल: - 4. / - यात्रु रेटिंग: 4. / - - यात्री रेटिंग: 3. / / LI> SEVASTOPOL: - सेभस्टोफोलमा पौडी खेल्ने पोखरीहरू? - यात्री रेटिंग:4। / - - यात्री रेटिंग: 4. / /
<। बालकनी: - यात्री रेटिंग: 4. / - - यात्री रेटिंग: 4. /5 - यात्री रेटिंग: 1
सुन्दर दृश्यहरूको साथ। सेवा्टापोलमा उत्कृष्ट दृश्यहरू र यात्रीहरू बीच लोकप्रिय छन्: - यात्री रेटिंग: 4. /5 - रेटिंग यात्रा Alnickers: 4. / / - यात्रीहरूको मूल्यांकन: 4. / /
sevastopol: आराम गर्ने परिवारहरूले यी होटलहरू सेभस्टोफोलमा एक पौडी खेल्ने पोखरीलाई मन पराउँछन्: : .. / - - यात्री रेटिंग: 4. / /
सेवास्टोपोलमा पोखरी नि: शुल्क पार्किंग: - यात्री रेटिंग: 4./5 - यात्रीहरूको मूल्यांकन: with /
क्षेत्रका सेवाहरू प्रस्ताव गरिएको क्षेत्रमा? यी होटलहरू पौडी खेल्ने पोखरीका साथ यी होटलहरू + सेवास्टोपोल प्रस्ताव स्पास सेवाहरू: - यात्री रेटिंग: 4./5 - यात्रा मूल्यांकन : 4. /5- यात्री रेटिंग: 4./5 <
बच्चाहरूको लागि घटनाहरू हुन्? - मूल्यांकन यात्रीहरू :./5 - यात्रीहरूको मूल्यांकन:5- यात्रीहरूको मूल्यांकन: SEVASTOOL को साथ seavistopol पहुँच को लागी, seuunstopol को साथ यी होटलहरू: - मूल्यांकन यात्रुहरूको: 4./5 - यात्रीहरूको आकलन: 4. /5 - यात्री रेटिंग: 1
को लागी, यी लोकप्रिय पौंडी सेवास्टोपमा पूल होटलहरू सुविधाजनक एयरपोर्ट शटल सेवा प्रस्ताव: - यात्री रेटिंग:। / - - यात्रीहरूको मूल्यांकन: 4. / / - यात्रीहरूको मूल्यांकन:4.. / on सबै कुरा अग्रिम कल गर्न र स्थानान्तरण जानकारी स्पष्ट पार्नुहोस्। / LI>
रिसोर्ट होटल ताविइड केपी लुकु लुकुल एक कोणको गाउँको दक्षिणपनमा अवस्थित छ, कोणको गाउँको दक्षिणपनको छेउमा। समुद्रमा निकटता (पहिलो लाइन), आरामदायक कोठा, उपचार मौसम, मनोरन्जन र एनिमेसन कार्यक्रमहरूले होटललाई उच्च-गुणवत्ता र पूर्ण विश्रामको लागि आकर्षक बनाउँदछ।
<< p> कहाँ सेवास्टोपमा रहन? म तपाईको ध्यान दिएर मेरो ध्यान यहाँ कुनै समीक्षा र रेटिंगको साथ आवास विकल्पहरूको चयन ल्याउँछु। होटेलहरू बाहिरी भागमा अवस्थित छैनन्, तर सेवा्टापोलको पर्यटन केन्द्रको नजिक। सेवास्टोपोलमा 1000 देखि 1000 बाट कम सामान्य होटलहरूको मूल्यहरू बढ्न सक्दछ, तर मौसमको बीचमा तिनीहरू बढ्न सक्छन्।
सेवा्टापोलको मुटुमा भान्छाको साथ, सेभास्टोफको मुटुको साथ, प्राथमिक बुलेभारबाट सडकमा अवस्थित छ।
परिवारमा ठूलो अपार्टमेन्ट स्टोभ, वाइ-फाई, बाथरूम संग एक भान्छा छ। तपाईं जनावरहरूसँग सक्नुहुन्छ। ग्राफिक पियरबाट minutes मिनेट स्थित छ।